Ukubuyekezwa kwemakethe ye-IC - Okuhle kakhulu kwe-EA Forex | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaAma-Brokers aphezulu we-forexUkubuyekezwa kwamaMakethe we-IC
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi Ama-Brokers aphezulu we-forex 1
Igama Lenkampani: AmaMakethe Ezizwe Eziyinhloko Pty Ltd (Amakethe E-IC)
AmaMarke e-IC awakwazi ukwamukela amaklayenti avela e-Afghanistan, Burma / Myanmar, Canada, Central African Republic, Cote d'Ivoire, Democratic People's Republic of Korea (North Korea), iDemocratic Republic of the Congo, i-Eritrea, i-Federal Republic yaseYugoslavia ( I-FFRY), i-Iran, i-Iraq, iJapan, i-Liberia, iLibya, i-New Zealand, iSomalia, iSudan, iSyria, i-Yemen, i-Zimbabwe, i-United States of America (USA)
Ukubuyekezwa Kwamamakethi we-IC - Broker Ehamba phambili Yabahwebi Abaphezulu bevolumu, ama-Scalpers, ama-Forex EA's
IC Markets ingenye yezwe elihle kakhulu Abakwa-True ECN forex wabathengi ukuhlinzeka ngezixazululo zokuhweba kwabathengisi bezinsuku ezisebenzayo nabaqashi kanye nabathengisi abasha emakethe ye-Forex noma abasebenzisa abacebisi be-FX Expert. I-brokerage inikeza amaklayenti ayo ukunciphisa amapulatifomu okuhweba okuhwebayo, ukuxhumana okuphansi kwe-latency kanye nokwehla kwempahla ephakeme.
Lokhu IC Markets Umdayisi uvuselela ngempela ukuhweba kwangaphambili kwe-forex. Bonke abathengisi abathengisa manje bakwazi ukuthola ukufinyelela kwamanani kanye nokuthengwa kwemali ngaphambili okutholakala kuphela kumabhange okutshala izimali kanye nabantu abanamanani aphezulu.
AmaMakethi Womhlaba Wonke (IMakethe ye-IC) yahlanganiswa eSydney, e-Australia ku-2007 yiqembu labachwepheshe embonini yezinsizakalo zezezimali eyasiza ekuphumeleleni komunye wabahlinzeki be-CFD omkhulu nakwa-Forex abahlinzeki be-Forex. IC Markets mission ukudala indawo engcono kakhulu futhi ebonakalayo yokuhweba imaklayenti yokuthengisa kanye nezikhungo ngokufanayo evumela abadayisi ukugxila kabanzi ekuhwebeni yabo.
Yakhiwe abadayisi abadayisi IC Markets izinikele ekunikezeni ukusabalalisa okuphakeme, ukukhishwa kanye nensizakalo!
Izimakethe ze-IC - Umthethonqubo
IC Markets igunyaziwe futhi lilawulwa yi IKhomishane yezokuThengiswa kwezokuThengisa yase-Australia (ASIC). Ukuhweba ngokuthula kwengqondo ukwazi IC Markets ihlolwe ngenye yezinhlangano ezilawulwa ngokwezimali ezisezingeni eliphezulu emhlabeni jikelele.
ASIC ngumqondisi wezinsizakalo zezezimali e-Australia enesiqiniseko sokuthi izimakethe zezimali e-Australia zilungile futhi zibala, zisekelwa ngabathengi abanokuzethemba nabathengi. I-ASIC iyiQembu leHulumeni likaHulumeni elizimele elahlelwa ngaphansi komthetho we-Australian Securities and Investments Commission Act (uMthetho we-ASIC), okwenza umsebenzi wawo omkhulu ngaphansi koMthetho we-Corporations.
IC Markets unendawo yomcwaningi ozimele wangaphandle ukuqinisekisa ukuhambisana nezibopho zokulawula nezinqubo zokusebenza.
Ngokuhambisana ne-Australian Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financial Act 2006 IC Markets inezinqubomgomo nezinqubo zokuqinisekisa ukuhambisana nomthetho. Lezi zinqubomgomo nezinqubo zenzelwe ukuvimbela imisebenzi yokwehliswa kwemali kusuka okwenzekayo. Inqubomgomo ye-Anti-Money Laundering ichaza amadokhumenti okumele usinikeze ngaphambi kokuvula i-akhawunti.
AmaMakethi Womhlaba Wonke uphethe i Ilayisensi yesevisi yasezimali yase-Australia (AFSL) No. 335692 futhi ugunyaziwe ukuqhuba ibhizinisi lezinsizakalo zezezimali e-Australia, okukhawulelwe ezinsizakalweni zezezimali ezihlanganiswe yi-AFSL.
IC Markets unikeza amakhasimende ayo ithuba lokuthengisa Izindawo ze-3 ezahlukene zokuhweba. Kusuka kulezi zindawo, abadayisi baqinisekile ukuthola okuhlangabezana nazo zonke izidingo zabo kanye nesitayela sokuhweba.
Isitatimende se-Metatrader 4 (MT4):
IC Markets unikeza amaklayenti ithuba lokuhweba ngomklomelo I-platform ye-Metatrader 4 (MT4). Akungabazeki ukuthi indawo yokuhweba ethandwa kakhulu emhlabeni yabathengisi be-forex. Ngoba kulula ukuyisebenzisa, enezindawo ezicebile futhi ikhono lokuhweba elizenzakalelayo.
Liye lakhula kusukela endaweni yokuhweba eya emphakathini womhlaba jikelele lapho izidingo zomthengisi zihlangene nezinqubo ezintsha zomhlinzeki wezobuchwepheshe. IC Markets inobambiswano nabaningi balaba bahlinzeki kwezobuchwepheshe. Futhi uyaziqhenya ukukunikeza isiteji esilandelayo sesizukulwane se-Metatrader 4, esenzelwe ukuthatha ukuhweba kwakho kuya ezingeni elilandelayo.
Bobabili I-standard yemakethe ye-IC futhi Amaqiniso we-ECN weqiniso ziyatholakala kwi-platform ye-Metatrader 4 yokuhweba.
Isitatimende se-Metatrader 5 (MT5):
The new I-platform ye-Metatrader 5 (MT5) inguqulo ebuyekeziwe neyithuthukisiwe ye-predecessor yayo eyisikhathi eside yikhiqiza imboni yabathengisi emhlabeni jikelele. IC Markets uyaziqhenya ngokuletha isiteji esizayo sesizukulwane se-Metatrader 5, esenzelwe ukunikela konke okudingayo ukuze uhwebe izimakethe.
Ubuchwepheshe be-charting obuphambili be-Metatrader ye-5 obuhambisana namathuluzi wokuphatha okuhlelekile akusiza ukuba uqaphe futhi ulawule izikhundla zakho ngokushesha nangokusebenza kahle. Kuyinto yesikhulumi esinamandla esinezici ezintsha ze-brand ezihloswe ekuthuthukiseni isipiliyoni sakho sokuhweba. Itholakala kokubili IC Markets izinhlobo ze-akhawunti: ECN True futhi Standard.
isiteji se-CTrader ihlanganisa ijubane lesikhulumi sokuhweba se-ECN ne-liquidity multi bank Izimakethe ze-IC Imvelo ye-ECN yangempela, ukuhlinzeka amakhasimende ngesisombululo sokugcina sokuhweba. Isebenzisa ubuchwepheshe obonakalisiwe obuzokwenza ukwazi ukuthatha ukuhweba kwakho ezingeni elilandelayo.
The AmaMakethe e-IC cTrader platform ikunika ukufinyelela ku-liquidity ejulile ku Izinkampani zezimali ze-64 kanye nezinkampani ezinkulu zokulingana ze-16. Abathengisi abakhuthele emhlabeni wonke bayakwazisa ukuhweba emvelweni we-ECN, ohlangene nokusebenza okuphezulu kwe-CTrader kanye namanani okusakaza okusuka kumabhange amaningi emhlabeni wonke, kukunika okuphelele ekuxazululeni izixazululo.
Ngaphezu kwalokho, IC Markets inikeza i-Metatrader 4, i-Metatrader 5 ne-CTrader njengezinhlelo ze-Android, i-iPhone ne-iPad. Lezi zinhlelo zinika abadayisi ukufinyelela okulula kuma-akhawunti abo nomaphi lapho bekhona.
Izimakethe ze-IC ' Ukhetho lwemikhiqizo ekhethiwe ngokucophelela lunikeza ukufinyelela ezimakethe ezithandwayo nakakhulu zomhlaba wonke emhlabeni ngamathuba amahle kakhulu okuhweba 24 / 7.
Imakethe ye-Forex inikeza abahwebi ithuba lokudayisa amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-5 ngesonto emakethe yezimali eningi kakhulu emhlabeni. Abathengisi bangasebenzisa ngokunakekelwa ukusabalala okuqine kakhulu, ukukhishwa okuphakeme, kuze kufike I-1: 500 ukuphakamisa, ne-deep interbank liquidity yonkana Izinkampani zezimali ze-60.
Thola ukungena ezimakethe ezinkulu zokulingana emhlabeni jikelele ngokunikezwa kwama-IC Amakethe we-IC Indices CFDs. With ukusakaza kusuka amaphuzu 0.5 on Izinkomba ze-16, abathengisi bangathatha umbono obanzi wezimakethe zezimpahla ngenkathi bejabulela ikhomishini mahhala kanye ne-24 / 5 yokuhweba ezimakethe ezinkulu.
Trade Amandla, ezoLimo futhi Imikhiqizo yemikhiqizo njengombhangqwana wemali ngokumelene ne-USD noma njenge-CFD Ezayo. Le nkampani ihlanganisile amanani aqinile nezinkinobho eziguquguqukayo kusuka ku-10c iphuzu ngalinye ukukunika umkhiqizo owodwa onamandla.
Finyelela ngaphezulu Ama-120 + amasheya amakhulu we-Stocks CFD ngaphesheya kwe-ASX, i-NYSE ne-NASDAQ yokuhwebelana kwezimpahla. U-IC ukhethe ububanzi bezinkampani ezithandwa kakhulu emhlabeni ukunika amathuba okuhweba amahle kakhulu.
Izibopho ze-6 banikeze abathengisi ithuba lokucabangela ngamanani ezithakazelo kanye nezingozi zomhlaba wonke / ukuyeka ukuzwa, ukwehliswa kwemali yokuhlenga izimpahla kanye nokuhlukanisa amasu abo. Khetha kusuka ku-Bond yezinhlawulo ezikhishwe ohulumeni emhlabeni wonke kuhlanganise neJapane, iYurophu, i-UK, ne-US
Hamba isikhathi eside noma esifushane kuwo wonke ububanzi obukhulu kunabo bonke emhlabeni Ama-cryptocurrencies. Ukuhweba ngokumelene nabanye abathengisi abathengisa 24 / 5 lapho ukunyakaza kwentengo kuqhutshwa ngokuyinhloko ngokwesaba nokuhaha, izindaba kanye nemizwa ekhona. Jabulela ukuhweba ngezinga kuze kube yi-1: 20 bese uqeda i-Cryptocurrency Exchange ingozi ngokuhweba nomdayisi olawulwa yi-ASIC.
I-Futures ingenye yefomu ethandwa kakhulu kwe-CFD. Izimakethe ze-IC zinikeza ububanzi I-4 i-Futures ehlukile kusuka emhlabeni wonke, kufaka phakathi i-ICE Dollar Index ne-CBOE VIX Index. Ama-CFD akwi-Online Futures anikezwa kuphela kwi-IC Markets 'Metatrader 4 Platform.
Izimakethe ze-IC ze-ECN yangempela umnikelo kanye nohla lwemikhiqizo emikhulu kufakiwe kuzo zonke izinhlobo ze-akhawunti. Okufanelekile kokubili abathengisi abasha nabanolwazi, mane nje ukhethe indawo yakho yokuhweba oyikhethayo kanye nomodeli wamanani wokuqalisa ukuze uqalise.
I-Akhawunti ye-ECN yesikweletu:
AmaMakethe we-IC cTrader iyimakethe eholela ekwesikhulumi se-ECN yokuhweba eyenzelwe kusukela emhlabathini kuze kube nokuhweba forex engqondweni. AmaMakethe we-IC anezinye zokusabalalisa okuqinile kunabo bonke abathengi be-Forex emhlabeni wonke. Akukho ukusakazwa okuncane esiteshini se-CTrader futhi esakazeka ku-EURUSD kungabonakala ku- 0.0 Pips ngesikhathi sokuhweba kweYurophu naseNyakatho Melika. Ukusabalala okusakaziwe ku-EURUSD kuyi-0.1 pips 24 / 5. Lokhu okwamanje i-EURUSD ejwayelekile kunazo zonke isakazeka kunoma iyiphi i-broker emhlabeni jikelele. I-akhawunti ihambelana kakhulu nabathengisi bamalanga nabaqaphi.
I-akhawunti ye-ECN yeqiniso:
I-IC Amakethe I-akhawunti ye-ECN yangempela inikeza ezinye zezimbalwa ezisezingeni eliphansi kunazo zonke ezitholakalayo. I-EURUSD ejwayelekile isakazeka yi-0.1 pips, enekhomishini encane ye-$ 3.50 ngayinye ekhokhwayo ngakunye. Ngokwezimali ezivela emaqenjini angaphezu kwe-50 kanye namachibi amnyama amakhemikhali amakhemikhali IC Amakethe I-akhawunti ye-ECN yangempela yakhiwe ngabahwebi bamalanga, abaqaphi kanye nabacebisi bezazi.
I-Akhawunti ye-Mac yeMetatrader Standard Standard ikunikeza ukuvinjelwa kokukhishwa okusheshayo kokukhanyisa kombane okuhlanganisiwe okuhlangene nokusabalalisa kusuka kuncane njenge-pipeline ye-1. Amaseva omakethe we-IC ahlala kwelinye lamasevisi wedatha athembeke kakhulu emhlabeni, i-Equinix NY4 eNew York. Ngokuxhumeka kwamabhange angaphezu kwe-50 nabahlinzeki bamakhemikhali uzoba nesipiliyoni esikhulu sokuhweba usuku lonke, nsuku zonke.
Izinhlobo ze-Akhawunti zeMakethe ze-IC Ukuqhathanisa
I-Akhawunti ye-ECN yangempela nge-CTrader I-Akhawunti ye-ECN yeqiniso nge-Metatrader -Akhawunti Standard
Izimali IKhomishini nokusabalala okuqinile IKhomishini nokusabalala okuqinile Ayikho ikhomishini, kodwa isakazeka kabanzi
platform Ukuhweba cTrader I-Metatrader 4 (MT4) ne-Metatrader 5 (MT5) I-Metatrader 4 (MT4) ne-Metatrader 5 (MT5)
Ama-akhawunti atholakalayo ngobunikazi Umuntu ngamunye, ohlangene, oqhamukayo Umuntu ngamunye, ohlangene, oqhamukayo Umuntu ngamunye, ohlangene, oqhamukayo
I-akhawunti yamaSulumane inikezwe Yebo Yebo Yebo
Kunconyiwe Abathengisi abavamile, ukukhwabanisa nokugoba Abathengisi abavamile, ukukhwabanisa, ukumboza kanye Expert Advisor Ukukhwabanisa, ukumboza kuvunyelwe
AmaMakethe we-IC we-Metatrader 4 namapulatifomu we-5 ayinayo imingcele yokuhweba!
Zinezinye zazo izimo zokuhweba ezingcono kakhulu ze-scalping futhi imvamisa high zokuhweba futhi Forex Expert Advisor ukuhweba emhlabeni jikelele, okuvumela abahwebi ukuba babeke imiyalo phakathi kokusabalalisa njengoba kungekho banga elincane elincane kanye nezinga lokubamba i-0. Lokhu kusho ukuthi ama-oda afaka ama-oda wokulahlekelwa kokuyeka angabekwa eduze kwentengo yemakethe njengoba uthanda.
Abathengisi bangakwazi futhi ukubeka izikhundla njengoba kungekho okuqala ekulawuleni kokuqala (FIFO) IC Markets. Abathengisi abakhokha umkhawulo emakethe ahlanganisiwe futhi ujabulele izinzuzo zokukhishwa kwe-margin.
The Izimakethe ze-IC Imvelo ye-ECN yangempela unikeza izimboni ezimbi kakhulu nezimo zokuhweba eziguquguqukayo emhlabeni wonke. Zilungele abahwebi abafuna ikhwalithi yokukhishwa engcono kakhulu nokusabalala okuphansi.
IC Markets Izintengo zokusakaza zivuliwe I-60 ehlukene yezibili zemali kanye nezinsimbi ze-4 kuwo wonke amapulatifomu okuhweba we-3. IC Markets uyakwazi ukunikeza amanye amanani entengo kakhulu embonini ngokuhlanganisa izingcaphuno ezivela kumabhange ahlukene we-50 kanye nemithombo yamakhemikhali amnyama. Le ntengo ephansi ehlangene nokuvinjelwa kokukhipha okungavumelekile kwenza IC Markets indawo eyamukelekayo yabathengisi bamalanga, abaqaphi kanye nalabo abasebenzisa Abacebisi Bezazi ze-FX (ama-Forex EA's).
Ngokunikela buyisela ku-1: 500 lo broker uvula indlela eya emakethe ye-forex yabathengisi beZitolo. Ukusebenzisa isisindo kusho ukusho okuncane kokuqala (margin) kuyadingeka. Ukusetshenziswa kwesilinganiso kungakhuphula ukuzuza kodwa ukulahlekelwa nakho kungadlula idiphozi yakho yokuqala.
AmaMakethe e-IC asakazeka yizimakethe eziholayo ngamanani okusakazwa kusuka kumabhange ahlukene e-50 kanye nemithombo yamanzi emithombo yamanzi. Amaseva we-latency aphansi ebangeni lebhizinisi Ibanga eliyiqiniso lokuhweba kwe-ECN lisho ukuthi uzohlala uhweba ngentengo engcono kakhulu. Ukusakazeka kungahamba njengama-pips e-0.0 ku-Metatrader 4, i-Metatrader 5, nama-platform we-CTrader True ECN.
Azikho amakhomishini ahlawulisiwe esebenzisa i-akhawunti ejwayelekile kodwa ukusakazwa kumakwe nge-pipeline ye-1 ngaphezu kwamazinga we-interbank. Ku-akhawunti ye-ECN yeqiniso kanye ne-CTrader, kukhona ikhomishana ye-$ 7 nge-standard standard round round kanye nokusabalalisa kuyashintsha futhi uqale kusuka kuma-pips we-0.0.
Indlela Yokufaka I-FX Expert Advisor (I-forex EA) Kwi-Metatrader 4 (MT4)
Funda ukuthi ungafaka kanjani ama-Expert Advisors ku-Metatrader 4 yakho esibulalayo. Ividiyo izokuqondisa ngesinyathelo ngesinyathelo ngokufakwa kwe-MT4 EA.
IC Markets unikeza ngaphezulu Izinketho zezimali ze-15 eziguquguqukayo in I-10 zezimali eziyisisekelo ezihlukene. Idiphozi ngokushesha futhi mahhala besebenzisa izindlela eziningi.
I-Bank Wire, i-BPAY, i-Broker kuya ku-Broker, i-China Union Pay, Ikhadi lesikweletu / i-Debit, i-Credit Card, iNeteller, i-Skrill (Moneybookers), i-Webmoney, i-Paypal
Nini ngezimali imali yakho yokuthengisa i-akhawunti yomthengi igcinwe kuyo Ama-akhawunti we-Client Trust ahlukanisiwe eNational Australia Bank (NAB) naseWestpac Banking Corporation (Westpac), bobabili ba-AA balinganise ama-Australian Banks. Ukukhokha kwe-elekthronikhi kusetshenziselwa ubuchwepheshe be-SSL (i-Secure Socket Layer) futhi bubethelwe ukuze kuqinisekiswe ukuphepha. Yonke imininingwane yokukhokha iyimfihlo futhi isetshenziselwa kuphela ukuxhasa nge-akhawunti yakho yokuhweba IC Markets.
Ukucubungula okusheshayo sincoma ukuthi bonke abanikazi be-akhawunti babeke imali kwi-akhawunti yabo yokuhweba ngaphakathi kwabo Indawo YabaKlayenti Abaphephile. Kusuka Endaweni Yakho Yeklayenti Evikelekile uzokwazi ukukhokhela i-akhawunti yakho ngesikhathi sangempela usebenzisa i-Credit Card ne-Skrill.
IC Markets ayikhokhisi imali eyengeziwe yokufaka imali. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi ungathola izimali ezikhokhayo nakwezinye izikhungo zebhange zomhlaba jikelele. IC Markets ayitholi mthwalo wemfanelo nganoma yiziphi izimali zebhange.
Ukucubungula ngokushesha bonke abanikazi be-akhawunti manje kudingeka bahambise izicelo zokuhoxiswa kusuka ngaphakathi kwabo Indawo YabaKlayenti Abaphephile.
Izicelo zokuhoxiswa isikhathi esinqunyiwe yi-12: 00 AEST / AEDT. Uma ukuhoxiswa kwakho kuhanjiswa ngaphambi kwalesi sikhathi kuzocutshungulwa ngosuku lokuthola. Uma ukuhoxiswa kwakho kuthunyelwe ngemuva kwalesi sikhathi kuzocutshungulwa ngosuku olulandelayo lebhizinisi.
IC Markets ayikhokhisi imali eyengeziwe yokuhoxiswa. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi ungathola izimali ezikhokhayo nakwezinye izikhungo zebhange zomhlaba jikelele.
Ukukhokhiswa kwe-Wire Bank yase-International, imali yokudluliswa yesikhungo sebhange cishe i-AUD 20. Le mali inqunywe emalini okuhoxiswa kwakho. I-Transfer Wire Wireless International izovame ukuthatha izinsuku zebhizinisi ze-3-5 ukuze ufinyelele i-akhawunti yakho yasebhange.
Isevisi yamahhala ye-VPS:
Inani elincane le-15 round turn (FX) inkatho ngenyanga ngayinye ikhalenda kudingeka ukuba ufanelekele i-VPS exhaswe.
AmaMakethi Womhlaba Wonke ine amaklayenti kuwo wonke umhlaba futhi inikeza ukwesekwa kwamakhasimende okukhulu 24 / 5 ngokusebenzisa ingxoxo ebukhoma, usizo lwe-intanethi, isigaba esibanzi se-FAQ, i-hotline yocingo ne-imeyili.
IC Markets ungomunye wabathengi be-Forex abahola phambili be-Australia Abathengisi Bombhalo Ophakeme, Abaqashi futhi Isazi Advisors. Le nkampani inikeza indawo ekhethekile yokuhweba ye-ECN, izici zezobuchwepheshe obuphezulu kanye nezimo zokuhweba ezinhle kakhulu. Umdayiseli unikeza ukukhethwa okukhulu kwezinto zokuthengisa, okufaka phakathi i-6 cryptocurrencies, kanye nensizakalo yokusekela amakhasimende eqinile.
Vakashela i-website esemthethweni yamaMakethe we-IC
Ubani amaMakethe we-IC?
IC Markets yiyona ehola phambili ye-True ECN forex broker e-Australia. Le nkampani yasungulwa ku-2007 nombono wokuhlinzeka ngokuhweba kwe-forex ukuhweba kwabahwebi abakhuthele. Umthengisi uzinikezele ukuletha abatshalizimali nabathengisi base-Australia nakwamanye amazwe izixazululo ngaphambilini ezitholakala kuphela kubaqeqeshiwe namabhange amakhulu okutshala izimali emhlabeni wonke.
Ubani abanezimakethe ze-IC?
IC Markets inkampani yase-Australian esekelwe ngasese enezindlunkulu eSydney. Ithimba labaphathi liqukethe abantu abaneminyaka engaphezu kwe-20 isipiliyoni kwimikhiqizo etholakalayo. IC Markets Abasunguli bawusizo ekuphumeleleni kwe-CFD enkulukazi ne-Forex umhlinzeki we-Forex.
Ingabe izimakethe ze-IC zilawulwa?
IC Markets ilawulwa yi-ASIC e-Australia futhi iphethe ilayisensi yezinsizakalo zezezimali 335692. IC Markets kuvumelana nezidingo zezimali ze-ASIC kanye nokuqhuba ukuhlolwa okuqhubekayo kwezinqubo zangaphakathi nokuphathwa kwezinhlekelele.
Uyini umehluko phakathi kwe-akhawunti ejwayelekile ye-ECN ne-True?
IC Markets inezinhlobo ze-akhawunti ye-4 yama-Metatrader amabili, i-akhawunti ejwayelekile kanye nomholi wemakethe, i-akhawunti ye-ECN yeqiniso. Umthengisi we-FX akakhokhisi ikhomishana kuma-akhawunti ajwayelekile kodwa esikhundleni salokho ubonisa ukusabalalisa nge-pipeline ye-1 ngenhla kwezinga le-Interbank elitholwa kubahlinzeki bezimali. I-IC Amakethe I-akhawunti ye-ECN yangempela ibonisa ukusakazeka kwe-interbank okufakiwe okutholakele kubanikezeli bezimali, kule akhawunti ikhomishana yi-$ 7 ngezinga elijwayelekile elijikelezayo.
Iyini imali encane edingekayo ukuvula i-akhawunti yokuhweba?
IC Markets kuvumela amaklayenti ukuthi avule i-akhawunti nge-USD $ 200 noma imali elinganayo.
Ungakhokhisa kanjani i-akhawunti yokuhweba?
IC Markets unikeza amaklayenti izindlela eziningana zokubeka izimali. Lezi yi: Wire Bank, BPAY, Broker kuya Broker, China Union Pay, Card Credit / debit, Credit Card, Neteller, Skrill (Moneybookers), Webmoney, Paypal
Ungakuhoxisa kanjani imali ku-akhawunti yokuhweba?
Sicela uthumele isicelo sakho sokuhoxisa nge-Client Area yakho. Zonke ukuhoxiswa okutholiwe ngaphambi kwe-12: I-00 Midday AEST / AEDT izocutshungulwa ngosuku olufanayo lwebhizinisi.
Ingabe iMakethe ye-IC ngumthengisi we-ECN weqiniso?
Yebo, IC Markets yi-True ECN Forex broker.
Ingabe Ukukhwabanisa Nokuhlanjululwa Kuvumelekile?
Yebo, IC Markets ivumela ngokugcwele ukuhlelwa kokubili nokwenza ama-scalping. Ukusakazeka kanye nezimo zokuhweba yizinketho ezikhethwe ngabathengisi abaningi bosuku nosuku bezingcweti emhlabeni wonke.
Ingabe izimakethe ze-IC zamukela amaklayenti ase-US?
IC Markets ayamukeli amaklayenti ase-US. Umthetho we-US CTFC uvimbela amakhasimende ase-US ekuhwebeni nabathengi ngaphandle kwe-US. IC Markets ihambisana nemigomo yamazwe ngamazwe ne-Australia.
Fx Active EA ukubuyekeza
Izinkampani ezinkulu zokulingana ze-16
Izindawo ze-3 ezahlukene zokuhweba
Izinkampani zezimali ze-64
Ikhomishini yezokuThengiswa kwezokuThengisa yase-Australia
Kuhle Forex Broker
izimo zokuhweba ezingcono kakhulu ze-scalping
I-Akhawunti Ejwayelekile YamaMakethi ye-IC
Izimakethe ze-IC ze-ECN yangempela
Izimakethe ze-IC I-Akhawunti ye-ECN yangempela
AmaMakethi Womhlaba Wonke
Ukubukezwa Kwemakethe Yezizwe Zomhlaba
Abakwa-True ECN forex wabathengi
AMAMAKI E-IC - I-ECN BROKER EYIQINISO LOKUKHULULELA KWABASEBENZI BAMVOLI NABASEBENZI Abathandekayo othandana nabo be-Forex! IZINDABA! Ukubuyekezwa Kwezimakethe ze-IC - Umthengisi Omkhulu Wabathengisi Abaphezulu Bomqulu, Abaqashi, ama-Forex EA Forex AmaMakethe angomunye wabathengi be-Forex wabathengi be-Forex abasemhlabeni abahlinzeka izixazululo zokuhweba kwabathengisi bezinsuku ezisebenzayo nabaqashi kanye nabathengisi abasha emakethe ye-Forex noma esebenzisa i-FX Abacebisi Abachwepheshe. Thola ulwazi oluthe xaxa namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/ic-markets-review/ I-brokerage inikeza amaklayenti ayo ukusika amapulatifomu okuhweba okuhwebayo, ukuxhumeka kwe-latency ephansi kanye nokwehla okuphezulu. Lo mthengisi wezimakethe ze-IC empeleni uvuselela ukuhweba kwangaphambili kwe-forex. Konke... Funda kabanzi "